Allgedo.com » Al-Shabaab oo isaga baxay magaalada Jowhar ee gobolka Sh/Dhexe
Al-Shabaab oo isaga baxay magaalada Jowhar ee gobolka Sh/Dhexe
Print here| By: allgedo.com: Sunday, December 9, 2012 // Jawaabaha waa la xiray
Ciidamadii Al-Shabaab ee kusugnaa magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Sh/Dhexe ayaa lasoo sheegayaa in ay isaga baxeen magaaladaas, kadib markii ay saakay ku dhawaadeen ciidamada dowlada Soomaaliya iyo kuwa Amisom.
Warar aynu ka helnay Dadka ku sugan Degmada Jowhar ayaa sheegaya in ciidamada Dowladda Soomaaliya iyo kuwa Amisom ay hareer mareen Degmada Jowhar islamarkaana ay aadeen dhanka Garoonka Degmada Jowhar oo ay dusha sare Magaalada kasoo galayaan.
Ciidamada ayaa la sheegay inay ku sugan yihiin deegaan lagu magacaabo Libin oo duleedka Magaalada Jowhar halkaasi oo ciidamada Dowladda Soomaaliya ay uga sii gudbeen dhanka garoonka.
Shabaab ayaa la sheegay inay dhanka Demada Buulo Burdo ee Gobalka Hiiraan halkaasi oo ay ku sugan yihiin Shabaab kale oo xoog badan.
Saraakiil ka tirsan ciidamada Dowladda Soomaaliya oo ku sugan deegaanka booroow ayaa halkaasi kula hadlaya ciidamada Dowladda Soomaaliya kuwaasi o qorsheynayaa sidii ay u geli lahaayeen gudaha Magaalada inkastoo ay cabsi muujinayaan.